TRUESTORY: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတွင် တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ကြောင်းပြန်အောင် ပြောသည့်၊ လုပ်သည့်သူများကို ချေမှုန်းရမည်ဟု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းပြောကြား
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတွင် တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ကြောင်းပြန်အောင် ပြောသည့်၊ လုပ်သည့်သူများကို ချေမှုန်းရမည်ဟု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းပြောကြား
ပန်မလှည့်ရန် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွင် တာ ၀န်အရှိဆုံး ဖြစ်သည်ဆိုကြောင်းနှင့်
သည့် လုပ်သည့် သူများကို ချေမှုန်းရ မည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ပြောကြားသည်ဟု အဆိုပါပါတီပိုင် သတင်းစာ တစ်ေ စာင်ဖြစ် သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ် သတင်းစာ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၇၈ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်နေသော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော် မတီ အစည်းအဝေးအတွင်း တက်ရောက်သတင်းယူခွင့် ရရှိထားသည့် ပြည်ထောင် စုနေ့စဉ် သတင်းစာမှ "မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဖို့ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန် အရှိဆုံးပါလဲ" ဟူသော မေးခွန်း ကို ဖြေကြားရာတွင် ၎င်းကယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ ပြီးတဲ့အခါ ပြည်သူအားလုံး မှာ လည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဈေး ကွက် စီးပွားရေး စနစ် ဖော်ဆောင်မှုတွေက အရင်အစိုးရ ဒီပါတီက ထောက်ခံမှုနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒါ ကို ပြည်သူတွေက သဘောကျတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်အောင်ပြောတဲ့ လူလုပ်တဲ့လူ သူတို့မှာ တာဝန် ရှိတယ်။ အဲဒီလူကို ချေမှုန်းရမယ်" ဟူသော သူရဦးရွှေမန်း ၏ ဖြေ ကြား မှုကို အဆိုပါ သတင်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ေ ရးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပါ။ ပြီးတဲ့အခါ ပြည်သူအားလုံးမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ဖော်ဆောင်မှုတွေက အရင်အစိုးရ ဒီပါတီက ထောက်ခံမှုနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒါကို ပြည်သူတွေက သဘောကျ တယ်။ထောက် ခံတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်အောင်ပြောတဲ့ လူလုပ်တဲ့လူ သူတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ အဲဒီလူကို ချေမှုန်းရမယ် . . . . .
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း NLD ပါတီနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများ ပြုလုပ်မည် ဟူသော အမေရိကန် ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုကိုလည်း တူတာများ ကို ပေါင်းလုပ်သွားပြီး မတူတာများကို ခဏဘေးဖယ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစိုးရဖွဲ့ခြင်း မှာ နောက် တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း သူရဦးရွှေမန်းက ဖြေကြားထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အမေရိကန် ခရီးစဉ်အတွင်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် NLD ပါတီနှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့မည်ဟူသော ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၏ ပြောစကားနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုကော်မတီသို့ ရှင်းရမည် ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်းက ပြောကြားထားသည်။
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်တွင် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အကောင်အထည် ဖော်ချင်သည် ဆိုပါက အသီးသီးသော ပါတီများသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပါတီများအဖြစ် သဘောထား ပြီး နိုင်ငံကောင်းအောင်၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေ ကြခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို ခံယူကာ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဲ့သို့ သဘောထား ဆောင်ရွက် ကြရန်လည်း ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး အဖွင့်အမှာစကားတွင် သူရဦးရွှေမန်းက ထည့်သွင်းပြော ကြားသည်။
ထို့ပြင် ဥပဒေပြုခြင်းတွင် တရားမျှတသော၊ နိုင်ငံသားများ လိုက်နာနိုင်သော ဥပဒေဖြစ်ရန် အရေး ကြီးကြောင်း၊ တရားမျှတမှု မရှိသော၊ နိုင်ငံသားများ မလိုက်နာနိုင်သော ဥပဒေများ ကို ပြဋ္ဌာန်း ပြီး ဆောင်ရွက်သည့် အခါတွင် တရားမျှတမှု မရှိ၊ နိုင်ငံသားများ မလိုက်နာနိုင်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများက မျက်ကွယ်ပြု၊ မမြင်ချင်ဟန် ဆောင်နေခြင်းသည်လည်း တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက အဖွင့်အမှာစကားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
Posted by TRUE STORY at 12:08 PM
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရန် ပြည်ခု...
မျိုးစောင့် ဥပဒေကို ပိတ်ပင်တဲ့ မဇင်မာအောင် ဘာလဲ ဘယ်လဲ
အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို အုပ်စုဖွဲ မုဒိန်း...
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အတ္ထုပတ္ထိသမိုင်း ဗွီစီဒီခွေ စတင်ဖြန...
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် တိုင်း(မ်) မဂ္ဂဇင်းအား မြန်မာ အစိုးရ ...
အင်ဒိုမီးခိုးတွေကြောင့် မလေးရှားမှာ အရေးပေါ်အခြေနေ ...
ပါကစ္စတန်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသည်တွေ ပစ်သတ်ခံရ
ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆံတော်မြတ် ဖူးကြရအောင်-ဘလောက်ဂါမိတ်...
မီဒီယာသမားများ လူစကားနားလည်အောင် သင်ထားဖို့လို
အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံကို တစ်မိနစ် ကျပ် ၅၀ ဖြင့် ၁၅၀၀ တ...
မလေးရှားရှိ တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သား အားလုံး တရားဝင်...
မြန်မာ့ဆင်ဖြူတော် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ငှားရမ်းမည့် အ...
မြန်မာ မင်းသမီးများ ထဲတွင် ပထမဆုံး ရင်သား ခွဲစိတ်ြ...
only me ပေးထားရုံဖြင့် လုံခြုံပြီဟု ထင်ထားသူများ သ...
NLD Monk has Support Law on Buddhist Woman's marri...
ရွှေညဝါလည်း ဦးဝီရသူ ရဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို အပြည့်...
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဆိုင်ရာ သြဝါဒခံယူပွဲနှင့် အကြိုညှိနှို...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကြိုဆိုကြောင...
14.6.2013 မှ 20.6.2013 ထိ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
မြန်မာကို ကုန်သွယ်ရေးအထူး ခံစားခွင့် ပြန်လည်ပေးဖို...
"၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်...
နိုးထလာမည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင် နိုင်င...
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး...
ဦးဌေးဦးနဲ့ ဦးသိန်းညွန့် သုံးသပ်တဲ့ သူရရွှေမန်းသမ္မတြ...
မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈၀ ဦး ဇွန် ၁၅ ...
ရုရှားနိုင်ငံတွင် မူဆလင် သုံးရာခန့်အား ၀တ်ပြုနေစဉ်...
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သား ဥပဒေ
တာမွေမြို့ နယ် တွင် ဆင်ဆာ မဲ့ခွေနှင့် ခွေ ကူးစက်မျ...
ထိုင်းနိုင်ငံတောင် ပိုင်း တွင် အရေးပေါ် အခြေ အနေြေ...
ခရိုနီ မကောင်းကြောင်းပြောသူများ မလေးရှားအရေး ရပ်ကြ...
မလေးမှ ပြန်မည့် မြန်မာလုပ်သားများအား Golden Myanma...
အွန်လိုင်းပေါ်က လူပြောအများဆုံး အကြောင်းအရာများ
Today myanmar video
ရန်ကုန်ရှိမလေးရှား သံရုံးရှေ့ မှာ နှင်းဆီ ၁၁ ပွင့်...
မိုးရွာသွန်းမှု များ၍ အင်းလေးကန်ကြီးသို့ ခရီးသွား ဧ...
မလေးရှားတွင် မြန်မာများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု ...
မလေးရောက် မြန်မာများအတွက် ဦးတေဇကလည်း ဒေါ်လာတစ်သိန်း...
မလေးရောက် မြန်မာများကိုကူညီရန် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အ...
မြန်မာတွေ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအတွက် လူ့အခွင့်အရေး စိုးရိ...
အနေထိုင်မတပ်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ပြေတီဦး ကို ယုံကြ...
မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ကူညီစောင့်ရှေ...
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အကျု...
မြန်မာကို EU က ကုန်သွယ်ရေး အထူးခံစားခွင့် ပေးတော့မည်
မိမိ "Facebook Profile" ကို ဘယ်သူဝင်ကြည့်လဲဆိုတာြ...
မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အမျိုးသမီးတပ်မှူးများ စတင်ခန့်အပ်
မလေးရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရက လုံးဝမမေ့...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ RCSS/ SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ယောဆ...
ကမ္ဘာ့ တတိယအကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ ပြည်တွင်းသို့ဝင်
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဈေး လိုက်လံ ရောင်းချသူ တစ်ဦး အားေ...
ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းအား လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် တတိယ...
တရုတ်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတ အင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှု ကာကွယ်ရေ...
"Huawei Ascend Mate စမတ်ဖုန်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း"
ရာဇာမင်းကား ဓါးမြ တိုက်ခံရသည့် နောက်ဆက်တွဲသတင်း
သမ္မတကြီး နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ SSA (တောင်ပိုင်း)ခေါင်းဆေ...
၂၀၁၅ တွင် ဦးရွှေမန်း သမ္မတ လုပ်မည်
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ် (၂၀၁၃) ဖွင့်ပွဲ သမ္မတကြီးဦး...
အရှေ့အာရှ စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်လာသည့် ကမ္ဘာ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းန...
Thinzar Nwe Win ရဲ့ ဓါတ်ပုံအလှ
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကိုကာကိုလာ အချိုရည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် ၀ယ်စီး...
ယနေ့အထူး ဖမ်းဆီးမှု့တွင် မြန်မာ 300 ကျော်အား စစ်ဆေး...
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ထိခိုက်ဒဏ်...
အိမ်ရှင်ကို ရိုက်ပြီးတော့ အိမ်လုဖို့ ကြိုးစားတာ ဘယ...
မြန်မာဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ညီလာခံ အိမ်ရှင်အဖြစ် ထိုက...
ကလေးနှစ်ယောက်နှုန်း ကန့်သတ်မိန့် ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစ်ိန် မေလကုန် ရေဒီယို...
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း မက်ဒယ်လိန်းေ...
တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်ပေးဆောင်ရသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းအ...
စစ်ရေးအမြင် ရှိသော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန...
သမ္မတ သည် စစ်ရေးအမြင်ရှိရန် မလို၊ လွှတ်တော် နှစ့် စစ...
မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးဝန်ေ ဆာင်မှု တင်ဒါအနို င်ရရှိရန် ...
ပဋိပ က္ခများ ကြိုတင်ကာ ကွယ်နိုင်ရေး ဒေသအ သီးသီး တွ...
သူနာပြု သိပ္ပံ ဘွဲ့ရ (အမျိုးသမီး) အုပ်ချုပ်မှု သင်တန...
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် General Sir D...
မြန်မာနိုင်ငံ အလံကိုင်၍ ဧ၀ရတ်တောင်ထိပ်မှ Sky Divin...
Dangerous for Myanmar (Burma) TheeLayThee
လမ်းမတော်မြို့နယ် ၀ါးတန်းဇက်ဆိပ်တွင် ဟိုင်းလပ်ကားတ...
အမေရိကန် မြန်မာစစ်ရေး ဆက်ဆံမှု အကန့်အ သတ်နဲ့ စတင်
တာလောကြီးေ ကျးရွာ မှ ဒေသခံ ရှမ်း တိုင်း ရင်း သား (...
မယ်လိုဒီ ပရိတ်သတ်များ အတွက် မယ်လိုဒီရဲ့ ဓါတ်ပုံ
စကားအရမ်း ပြောသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတရုံး...
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်အား ရန်ကုန်လူထု သောင်းသောင်ဖျဖ...
ကျပ် သိန်း ၂၆၀ ဖောက် ထွင်း မှု ခြောက် နာ ရီ အတွင်း မိ
က ချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခ သည် များ တစ် လ အ တွင်း နေ ရပ်ြ...
KIO ကိုယ် စား လှယ် အဖွဲ့ လိုင် ဇာ သို့ အပြန် ဆန္ဒပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နေ အိမ်ရှေ့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မည့် အစ...
မြေမြုပ်မိုင်း ပြသနာသည် မည်သူ့ အပေါ်၌ တာဝန် ရှိသနည်း
ဘယ်သူတက်တက် တပ်မတော်သား ဆိုတာ အမိန့် နာခံတယ်
ဧရာဝတီ သတင်းအပေါ် လူထုပုံရိပ်မှ ကူးယူကိုးကားပြီး လိ...